>Cartoon Maung Maung San – Third Force
ဆောင်းဝေ (နတ်မောက်) ● လူအုပ်ကြီး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၈ အရွယ်ရောက်ခါစက မုန့်စားမယ်ဆိုပြီး အပြင်ကစက္ကူပတ်ကိုခွာလိုက်တေ့ာ အထဲက မြွေအရှင်တကောင်ထွက်လာ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေဟာ အဲဒီမြွေအရှင်ကို ခါးပိုက်ထဲထည့်ယူသွားကြတယ် အရာရာဟာ ဘဝပဲဆိုပြီး မိုးတဖွဲဖွဲကျနေမှုကိုတောင် သယ်ယူသွားကြတယ်။ တနေ့မှာ သစ်ပင်ကြီးထဲနေရတာ အညွှန့်တွေထွက်လို့မရဘူးဆိုပြီး ဖြတ်ပြေးသွားတဲ့ရထားအသီးသီးပေါ် အရိပ်တွေခုန်းဆင်းသွားကြတယ် ဘူတာအောက်မှာရှိတဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာဖြတ်သွားဖြတ်လာများက သူတို့ရထားတဲ့နေ့ကလေးတွေကို အိပ်ထဲထည့်ဇစ်ပိတ်ကာ နောက်ထပ်မမြင်ရမှုဆီ လမ်းဖြတ်ကူးသွားကြတယ်။ ကျားတွေဟာ သေချင်လို့တောပြောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျောင်းမှာ ကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးနေကြပြီ ဘဝရဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုများကို မယူမနေရဘာသာအဖြစ် ပြဌာန်းထားလိုက်ကြပြီ မုန်တိုင်းကျမှုက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး လူသားတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကသာ အရေးကြီးတာပါစာသားကို လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲ ကူးရေးခိုင်းထားပြီးပြီ နောက်တေ့ာ ငါ့နိုင်ငံပြန်ရောက်ရင်ဖွင့်ဝင်ရမယ့်အိမ်သော့တချောင်းလည်း ဘယ်သူ့ဆီမှ မရှိကြတေ့ာဘူးတဲ့။ တောပန်းကလေးတွေတောင်မှ ကိုယ့်ထက်ညံ့တဲ့ရနံ့နဲ့တေ့ာ မမွှေးမြချင်ပါဘူးတဲ့ ဒီအတိုင်းဆို လူအုပ်ကြီးက ပိုကြီးမားလာဖို့ပဲရှိတေ့ာတယ်...
ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ရဲ့ ဘာလဲဟဲ့ … ငြိမ်းချမ်းရေး …
ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ရဲ့ ဘာလဲဟဲ့ … ငြိမ်းချမ်းရေး … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) Related posts ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ရဲ့ လေလုံးကြီးပါလား … (0) ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ● ဝါသနာ … (0) ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ● ရှိတာအကုန်ထုတ်စမ်း … (0) ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ● မတူတာ...
K ငြိမ်းချမ်း ● မတရားမှုတွေကို ငြင်းဆိုထားတဲ့ကဗျာ (သို့) ကွန်စစ်ကောင်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၈ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ စစ်အစိုးရလက်ထက်များစွာ ဓားမိုးသေနတ်မိုးအောက်မှာ နေခဲ့ကြရတာ တကမ္ဘာလုံး အသိဖြစ်ပါ တယ်။ ငြင်းဆှိုမှုမဲ့စွာ မတရားတဲ့အမိန့်တွေ စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေအောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ကိုယ် မနှစ်သက်လို့ ကိုယ်မကြိုက်လို့ ကိုယ်မလိုက်နာချင်လို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ရင်လည်း သိတဲ့အတိုင်းစစ်ဝါဒီတွေက နှစ်ရှည်လများ ထောင်တွေချ၊ အညွှန့်တွေချိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ခုရော ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ကာလမှာရော ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေ၊ လယ်သိမ်းမြေသိမ်း ပြ ဿနာတွေ လုပ်ခလစာမညီမျှမှုတွေ အစရှိသဖြင့်ကို ငြင်းပယ်ခွင့်ရှိနေပြီလား။ လွတ်လပ်စွာ အနာမဲ့စွာ ငြင်းဆိုခွင့်...
ကျော်ကျော် (မြရည်စမ်း) ● ဆစ်​ရင်း… စစ်​ရင်း ကျွံဝင်​ခဲ့ရပါ​လေ၏ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၈ (က) ညကြီးမင်းကြီးမှာ မိုး​တွေတအားသည်း​နေ​တော့ ကျွန်​​တော့်​​ဘေးမှာ အိပ်​တဲ့​ကောင်​​လေးက ထပြီးထိုင်​​နေတယ်​။ သူ့ကို ​ကြောက်​​စိတ်​​ပြေဖို့ ​အား​ပေးစကား​လေး​တွေ ​လျှောက်​​ပြော​ပေး​နေဖြစ်​​ပေမဲ့​ ကျွန်​​တော်​ကိုယ်​တိုင်​လည်း ​ကြောက်​​နေမိတာ အမှန်​ပါ။ တခါတခါ​တော့ မိုးသံ​တွေကြားမှာပဲ အ​ဝေးကြီးက​တော်​လဲသံ၊ ​မြေပြိုသံကို ကြားရတတ်​ပါတယ်​။ အဲဒီလိုအခါမျိုးဆိုရင်​...
ကာတွန်း ဖောင်းဖောင်းရဲ့ ရှင်းလင်းသင့်ပြီ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ဖောင်းဖောင်း Related posts ကာတွန်း ဖောင်းဖောင်း● သတိရနေပါတယ် (0) ကာတွန်း ဖောင်းဖောင်း ● ပြန်လာလဲပေးပါ … (0) ကာတွန်း ဖောင်းဖောင်း ● ဟိုးတုန်းကဖြင့် ပိုလျှံခဲ့သည် …....
စိုးခိုင်ညိန်း ● အခု ခင်ဗျားဖတ်နေတဲ့ စာမျက်နှာ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၈ ပထမဆုံး ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စတင်ခဲ့တာကတော့ အခါတိုင်းလို အေးမြတဲ့ မနက်ခင်း တစ်ခုမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီစာမျက်နှာဆီ ရောက်ဖို့ မျက်နှာသစ် ၊ သွားတိုက်၊ ကိုယ်လက် သန့်စင်ရပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဆွဲပြီး ထိုင်နေကျ...
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ကြိုက်တာရွေးစေ …
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ကြိုက်တာရွေးစေ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရာဇာသာစည် Related posts ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ပျော်လို့ဝရင် မော့ကြည့်ပါ … (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ အပျော်တမ်းအဖွဲ့ (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ မပြောင်းလဲသူ … (0) ကာတွန်း...
တင်လတ်ကို ● ၁၉၉၅ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၈ ပျော်ရွှင်မှုဟာ ထိုင်လို့မကောင်းတော့ အော်စကာမှာ တပ်ရင်းရွှေ့လိုက်တယ်။ အဲဒီခေတ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ ငါတို့ကျောင်းပါပဲ ငါတို့စကူးမှာ ငါတို့တွေ ဂုဏ်ထူးထွက်ခဲ့ကြ။ အစိုးရမကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ နားထောင်ကြ အစိုးရပိတ်ပင်တဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ကြ အစိုးရမနှစ်မြို့တဲ့ ဆံပင်အရှည်ကြီးတွေ ထားကြ။ ငါတို့ကို တွေ့ချင်ရင် လမ်းမကြီးတွေပေါ်ရှာ နောက်ထပ်သေချာတဲ့နယ်မြေကတော့...
ထက်သစ် ● အပွန်းအပဲ့ မခံခဲ့ရတဲ့ စိတ်​အပျိုစင်​​လေးရဲ့အပြန်​ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၈ မြို့ရဲ့ရှုတ်​​ထွေးမှုကြားထဲ ပြုတ်​ကျလာတဲ့ ​တောရှုခင်းစစ်​စစ်​ကြီး​ပေါ့ အသံ​တွေနဲ့လန့်​ပြီး​သေ​နေတဲ့ မြို့​တော်​ကြီးက​တော့ ​မော်​တာသံ တဝီးဝီးကြားမှာ အရဲရင့်​ဆုံး သက်​​သေရထားသလို သူ့နိစ္စဓူဝ ရှုမျှော်​ခင်းကို ပုံ​ဖော်လို့… အသက်​ရှူမှားရှာသူ လိပ်​ပြာ​လေးခမျာ အ​တောင်​ပံ​တွေ ပြုတ်​ကျမတတ်​ခပ်​ရင်း ဝင်​ဆန့်​ခဲ့ပါတယ်​ ​ဖော်ရွေခဲ့ပါတယ်​ လက်​ချင်းဆွဲလို့ နှုတ်​ဆက်​ခဲ့ပါတယ်​...
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ငါ့ဟာတွေတော့ မထိနဲ့ဟေ့ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီထွေး Related posts ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ပြေးမလွတ်တွေ … (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ တက်ကုန်ပြီ …. (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ဆင်ခြေများတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း (0)...
ကြိုးကြာငှက်တို့ရဲ့အပြန်လမ်း (ဒေါက်တာစိန်ဝင်း) မြတ်လှိုင်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၈ ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်မသိခဲ့ပါ။ ဒီအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ကိုမတရားအသင်းကြေညာခဲ့တာ၊ အကြမ်းဖက်သူများလို့ သတ်မှတ် ခဲ့တာ ဘယ်တုန်းကလဲဆိုတာ။ ကျွန်တော်သိခဲ့တာက အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်က ဒေါက်တာစိန်ဝင်း ဆိုတာရယ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမေရိကားမသွားခင်မှာ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ(NCGUB) ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာ လောက်ပဲ သိခဲ့ရပါတယ်။၂၀၁၅ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အင်အယ်ဒီအနိုင်ရပြီး...
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ● ရုပ်အလောင်း (သို့မဟုတ်) လူနာကို နေရပ်ရင်း ပြန်ပို့ခြင်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁ အဝေးပို့ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် ငှားရမ်းခ များပြားသောကြောင့် ပိုမို သက်သာမည့်နည်းလမ်းကို လူနာရှင်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများက မျှော်လင့်နေကြသည်။ (ရန်ကုန်) — ဘကြီးဖြစ်သူ ရန်ကုန်တွင် ဆေးကုသမှုခံယူစဉ် ကွယ်လွန်သွားရာ ရုပ်အလောင်းကို...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – မေမေက ပြောထားတယ်၊ သစ်ခုတ်သမားတွေ မလိုတော့ဘူး တဲ့ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုနေးသစ် ● ငါး​မြားချိတ်​​ပေါ်က ငါးစက်​ရုံ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၈ မ​မျှော်​လင့်​ခြင်း​တွေ အသံ​သေပြီးရင်း ​သေလို့။ ​​မေးချင်​တယ်​ ခိုက်​ခိုက်​တုန်​ စိုရွှဲရင်း မတိတ်​နိုင်​​သေးတဲ့​လောကမှာ။ အရွက်​​ခြွေတယ်​ အကိုင်းခုတ်​တယ်​ ပင်​စည်​ဖြတ်​တယ်​ ​နောက်​ဆုံး အမြစ်​ပါမကျန်​။ အထက်​ကို မဆန်​နိုင်​ဘူး စုန်​ဆင်းလာတဲ့ အရှိန်​​တွေ​ကြောင့်​ ပဲ့ကျခြင်းကမ်းပါးများ။ ငါး​တွေက​တော့ ဥချတိုင်း ​မြွေအမြိုခံရ လုံးပါးပါးရင်း။...
လှကျော်ဇော ● အနောက်နိုင်ငံများ ကျဆုံးပြီလား (အနောက်နိုင်ငံများအတွက် မေတ္တာလက်ဆောင်) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၁၊ ၀၁၈ ဒီနှစ် ဧပြီလမှာ ပင်ဂွန်းစာအုပ်တိုက်က အနောက်နိုင်ငံများ (အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံများ) အကြား အတော်လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားစေတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ထွက်လာပါတယ်။ Has the West Lost it. အနောက်နိုင်ငံများကျဆုံးပြီလားတဲ့။ အနောက် နိုင်ငံများအတွက် လှုံ့ဆော်ဖို့လို့ဆိုပြီး ထွက်လာတဲ့စာအုပ်ပါ။...
မိုက်ခဲစိန် – ထရန့်ပြည်ထောင်စုပူတင့်သမ္မတနိုင်ငံတော် တဲ့လား (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၈ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမတနိုင်ငံတော် လို့ မခေါ်တော့ဘူး။ ဒေါ်နယ်ထရန့်ပြည်ထောင်စုပူတင့်သမတနိုင်ငံတော်လို့ပဲ ခေါ်တော့မယ်။ အမေရိကန်တွေ စုနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုမှ မဟုတ်တော့တာ။ ဒေါ်နယ်ထရန့် ထင်ရာစိုင်းတာကို ငုံ့ခံနေရတဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်နေမင့်ဟာကိုး။ သမ္မတကလည်း ရုရှား၏စွက်ဖက်မှုတွေကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်လာရသလိုလို ဖြစ်နေတော့ကာ ရုရှားသမတကြီးပူတင့်လက်အောက်က သမ္မတနိုင်ငံတော်လို့...
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြပွဲ (Participatory Video Screening) ဇူလိုင် ၂၂ရက်မှာ ပြသမယ် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၈ ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်ကျောင်းမှ မြန်မာလူငယ်ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူများ ဖန်တီးထားသော မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုများပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်ကလေးဈေးလမ်း (အလယ်ဘလောက်)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် အမှတ်၁၀၀ရှိ ပန်သူရိယ အနုပညာ ဆုံမှတ် ပြခန်းမှာ ဇူလိုင်၂၂ ရက် နေ့လယ်၂ နာရီ...
Our diverse Identities အမည်ရတဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ် Pansodan Scene မှာ ကျင်းပမယ် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၈ Our diverse Identitiesအမည်ရတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားခြားနားသော ကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာများ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်တခုကို ရန်ကုန်မြို့ကျောက်တံတားမြို့နယ် ပန်းဆိုးတန်းလမ်း အမှတ် ၁၄၄ရှိ Pansodan Scene မှာ...
ဝမ်းနည်းခြင်းမှတ်တမ်း မောင်နောင်မွန် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ ဆေးသားပြယ်စပြုနေတဲ့နေဝင်ချိန်တခုလို အဝေးကတေးဆိုသံတွေ ထွက်ခွာ။ ဝင်သက်တွေ ခပ်ပြင်းပြင်းကြား လေတိုးသံတွေတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့။ ဖြေသိမ့်စရာမဲ့တဲ့ ကောင်းကင်အောက် အရောင်များဟာ လှပညီညွှတ်နေ ထွက်ခွာသွားချိန် မောမောလျလျဖြစ်နေတဲ့တိမ်စိုင်လေးတွေလို။ ခပ်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ခတ်လာတဲ့ ပင်လယ်လှိုင်းတွေလိုပေါ့ ပြန်လာလိုက် ပြန်သွားလိုက်ပါပဲ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းက လူကူးမျဉ်းကျားမှာ ရပ်၊ ကြည့်၊ သွား ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ မီးခိုးခေါင်တိုင်အခိုးအငွေ့တွေကိုငေးရင်း...
ဂျူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့ထွက်မည့် ကေဇော်မိုးနှင့် ရိုးခက် စီစဉ်သည့် ၂ လတစ်ကြိမ်ထုတ် ကဗျာသီးသန့်စာစဉ် (မိုးမခ)ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ ၂၁ ပုဒ်၊ ကဗျာရေးရာဆောင်းပါး ၄ ပုဒ်နှင့် ကဗျာ့စကား ၁ ပုဒ် ပါဝင်ပြီး စာမျက်နှာ ၃၂ မျက်နှာ၊ စာဖောင် (၄) ဖောင်ဖြင့် ဇူလိုင်...
ကာတွန်း မင်းထက်လူ – ဖေ့စ်ဘွတ်ကယ်ပေလို့ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ Related posts ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ကြပါ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ လျှော်ကြမယ် ဖွပ်ကြမယ် (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့...
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင်း – အပိုင်း (၁၇) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ တိဗက်ပြည်က မြှောက်ထားတဲ့ဆင်ခြေထောက်အောက်မှာရောက်နေသည့် ကြက်ဥနှင့် တူပါသည်။ ခြေချလိုက်ရုံမျှဖြင့် ဘ၀ပျက်သွားမည့် အနေအထားဖြစ်သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် လေပြင်းမုန်တိုင်းတို့ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ တရုတ်စစ်သား များက လားမားဘုန်းတော်ကြီးများကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း၊ ကျောင်းတိုက်များကို သိမ်းပိုက်ပြီး...
ဇင်လင်း ● စစ်ပွဲများမရပ်စဲနိုင်သရွေ့နိုင်ငံ့စီးပွားရေးဘဝနိမ့်ကျနေမည် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၁ မှ ၁၆ ရက်များတွင် အချိန်အတန်ကြာ တန့်ရပ်နေခဲ့သော ၂၁ ရာစုပင်လုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ (၁၆) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC)...
မောင်ကြူးရင့် – ထင်ရူးပင်ရိပ် နှစ်ငါးဆယ် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ ( ၁ ) ဆရာမောင်သာနိုးဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ ထင်ရူးပင်ရိပ်နိုင်ငံတကာကဗျာစာအုပ်ဟာ နှစ်ငါးဆယ် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ရာစုနှစ်နဲ့ပြောရရင် ရာစုနှစ်ဝက်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာကဗျာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာ ကြည့်ရင် ဘာသာပြန်ကဗျာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှပါတယ်။ မြန်မာကဗျာဘာသာပြန်သမိုင်းကို သုတေသနလုပ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီအပိုင်းကိုချန်လှပ်ခဲ့ပါမယ်။ အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာက ထင်ရူးပင်ရိပ် နှစ်ငါးဆယ်အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ( ၂ ) ဆရာမောင်သာနိုးရဲ့ထင်းရူးပင်ရိပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့...
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလှေနဲ့ ဒီလူတွေ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ Related posts ကာတွန်း ညီထွေး – ခေတ်သစ် ဝေါဟာရများ (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေသူတွေ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့...
ဥက္ကာကျော် ● ပိုးလမ်းကြီးပေါ်က ငြိမ်းချမ်းရေးကြေညာစာတမ်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈ (က) ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြေညာစာတမ်းပေါင်း မြောက်များစွာ ထွက်ပေါ် ခဲ့ဘူးပေပြီ။ ကဗျာဆရာတို့ရဲ့ ကဗျာကြေငြာ စာတမ်းများ၊ ပန်းချီဆရာတို့ရဲ့ ပန်းချီကြေညာစာတမ်းများ၊ နိုင်ငံရေးသမားတို့ရဲ့နိုင်ငံရေး ကြေငြာစာတမ်းများ စသည်ဖြင့်။ ထိုထဲတွင်ရုရှားကဗျာဆရာ မာယာကော့ဖ်စကီးတို့ရဲ့ အနာဂတ်ဝါဒကဗျာ ကြေညာစာတမ်းသည် အလွန်ကျော်ကြား လှပေ ၏။ ...